Ethiopia: Mangataka Fanalava-Potoana Hanohizana Ny Famotorana Ireo Bilaogeran’ny Zone 9 Ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Ethiopia: Mangataka Fanalava-Potoana Hanohizana Ny Famotorana Ireo Bilaogeran'ny Zone 9 Ny Polisy
Voadika ny 16 Mey 2014 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Español, বাংলা, Português, English
Tamin'ny Alarobia lasa teo, niakatra teo anoloan'ny fitsarana ao Addis Abeba ireo bilaogera Ethiopiana Atnaf Berahane, Zelalem Kibret ary Natnael Feleke, (mpikambana ao amin'ny vondron'ny bilaogera Zone 9 avokoa izy rehetra), sy ireo mpanoratra gazety Asmamaw Hailegeorgis, Tesfalem Waldyes ary Edom Kassaye, izay fotoam-pitsarana voalohany hatramin'ny nanagadrana azy ireo tamin'ny 25 Aprily ity. Nandritra ny fakàna ambavany naharitra fotoana fohy, nangataka fotoana lavalava kokoa hanaovana famotorana ny polisy.
Zelalem sy Tesfalem arahin'ireo polisy tao amin'ny fitsarana Addis Ababa. Nahazoana alalana ny sary.
Araka ny filazan'ny mpisolovava azy ireo, miatrika vesatry ny fanekena fanampiana avy amin'ny ONG vahiny sy “fandrisihana hanao herisetra amin'ny alalan'ny media sosialy” ireo voagadra ireo.
Nosamborina tamin'ny volana Aprily lasa teo ireo lehilahy sy vehivavy enina miaraka amin'i Befeqadu Hailu, Abel Wabela sy Mahlet Fantahun — izay mpikambana ao amin'ny vondrona Zone 9 avokoa— ary nampidirina am-ponja nanomboka teo. Mpanoratra malaza amin'ny resaka politika sy sosialy ao Ethiopia avokoa izy rehetra ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fikarakarana adihevitra politika sy fihetsiketseha-panoherana antserasera.
Tsy azo natrehin'ny besinimaro ny fotoa-pitsarana, na dia teo aza ireo ezaka marobe nataon'ireo diplaomaty sy ny hafa hanatrehana izany. Araka ny filazan'ireo namana avy ao amin'ny fikambanana Global Voices izay nanatrika ny zava-niseho, noraràna tsy hiresaka tamin'ireo gadra ireo olona tao ivelan'ny trano fitsarana. Nanofahofa tanàna tamin'ireo gadra ireo mpanohana niandry tao ivelan'ny fitsarana ary novalian'izy ireo tamin'ny tsiky izany. Tsy afaka nanofahofa tanana izy ireo satria mifatotra rojovy ny tanany.
Nampihetsi-po tanteraka ny zava-niseho: nitomany ireo namana sy fianakaviana, ary hita fa tena reraka i Natnael Feleke. Hita nitomany izy raha niditra sy nivoaka ny efi-pitsarana. Natahotra ny olona fa mety niharan'ny fampijaliana izy, saingy ankoatra an'i Natnael, hita fa natanjaka sy naneho herin-tsaina ny ambiny.
Nahemotra amin'ny 17 Mey ny fotoam-pitsarana.
Fantaro ny momba ity tantara ity :
Nahoana ny bilaogy no raisin'ny governemanta Etiopiana ho fandrahonana azy, 10 Mey 2014
Mpisolovava Miangavy ny Vaomiera Afrikana, ny Ekspera Firenena Mikambana Hiditra an-tsehatra amin'ny raharaha Bilaogera Zone 9, 3 Mey 2014
FANAMBARANA: Miantso Ho Amin'ny Famotsorana Ny Mpanoratra Gazety Sivy Ao Ethiopia Ny Global Voices , 2 Mey 2014
Netizen Report: Famoretana ny Fahalalaham-pitenenana ao Ethiopia, 30 Aprily 2014
Mpikambana Enina Aminà Bilaogy Itambaram-be Nosamborina Tao Etiopia , 25 Aprily 2014